FeCl2 (iron(ii) chloride) => ? | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
FeCl2 =? | Isu dheellitirka Kiimikada
birta (ii) chloride =?
3FeCl2 + 4HNO3 → 2H2O + MAYA + Fe (MAYA3)3 + 2FeCl3
bir (ii) koloriin nitric acid biyaha nitrogen monoxide bir (iii) amooniyam koloriin bir ah
(digo yara) (digo yara) (lng) (kh) (digo yara) (digo yara)
(la soco) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (la soco)
3 4 2 1 1 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3FeCl2 + 4HNO3 H 2H2O + MAYA + Fe (MAYA3)3 + 2FeCl3
Waa maxay xaaladda falcelinta FeCl2 (iron(ii) chloride) ee ay la falgasho HNO3 (nitric acid)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NO (nitrogen monoxide) iyo Fe (NO3)3 (iron(iii) nitrate) iyo FeCl3 (iron chloride)?
Dhacdada ka dib FeCl2 (iron(ii) chloride) waxay la falgashaa HNO3 (nitric acid)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga FeCl3 (birta chloride), oo soo muuqata dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Hnoxnumx (nitric acid), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3FeCl2 + 4HNO3 H 2H2O + MAYA + Fe (MAYA3)3 + 2FeCl3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NO (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MAYA (nitrogen monoxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)3 (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee FeCl3 (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl3 (kloriinta birta) badeecad ahaan?
FeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + MAYA2 + Fe (MAYA3)3
bir (ii) koloriin nitric acid biyaha koloriin koloriin nitrogen dioxide bir (iii) amooniyam
(digo yara) ( đậm đặc ) (lng) (kh) (kh) (digo yara)
(la soco) (xoog leh) (xoog leh) (xoog leh) (kanu đỏ)
1 4 1 2 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta FeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + MAYA2 + Fe (MAYA3)3
Xaaladda Kale: la kariyey
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo HCl (hydrogen chloride) iyo NO2 (nitrogen dioxide) iyo Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)?
FeCl2 waxay ku falcelisaa xalka aashitada
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada FeCl2 + 4HNO3 → H2O + 2HCl + MAYA2 + Fe (MAYA3)3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HCl (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HCl (hydrogen chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NO2 (nitric acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NO2 (nitrogen dioxide) alaab ahaan?
koloriin bir (ii) koloriin koloriin bir ah
(kh) (dd) (dd)
(dib u eeg) (la soco) (la soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3
Waa maxay xaaladda falcelinta Cl2 (chlorine) ee FeCl2 (iron(ii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa FeCl3 (kloriinta birta)?
Iron II cusbo FeCl2 waxaa oksijiiyay Cl2
Dhacdada ka dib Cl2 (chlorine) waxay la falgashaa FeCl2 (iron(ii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee FeCl3 (iron(ii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeCl3 (kloriinta birta) badeecad ahaan?
FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe (OH)2
bir (ii) koloriin sodium hydroxide chloride sodium
(digo yara) (rnn) (digo yar yar kết tủa)
(trung) (xanh trắng)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe (OH)2
Waa maxay xaaladda falcelinta FeCl2 (iron(ii) chloride) ee ay la falgasho NaOH (sodium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaCl (sodium chloride) iyo Fe (OH) 2 ()?
FeCl2 waxay la falgashaa NaOH si ay u soo saaraan roobab cadaan iyo buluug ah
Dhacdada ka dib FeCl2 (iron(ii) chloride) waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe (OH)2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Fe(OH)2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(OH)2 (sodium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(OH)2 () badeecad ahaan?